Madaxweynaha Soomaaliya oo si weyn loogu soo dhaweyey Waaciye,Carmo iyo Boosaaso. | Puntland Vision
Madaxweynaha Soomaaliya oo si weyn loogu soo dhaweyey Waaciye,Carmo iyo Boosaaso.
Madaxweynaha dawlada Federalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo wafdi ka socday dawlada Puntland ayaa maanta gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dawlada Puntland.
Madaxweynaha Soomaaliya oo kormeer uu maanta ku tagay Kuliyada Tababartka Ciidamada Carmo halkaasi oo ay kusugnaayeen ciidamo tababar ku jira ayuu Khudbad dhinacyo badan taabanaysa uga jeediyey wuxuna ugu baaqay inay ka faa,iidaystaan tababarka si ay dalka u difaacaan.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in Puntland ay tahay meel nabadeed, meel ku wanaagsan soo dhawayn.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa khudbadii u ka jeediyey Degmada Carmo wuxuu ku sheegay sanadkan inuu yahay sanadkii Hormarka iyo dib u dhiska Dalka uuna yahay sanad ay u aqoonsatay Dib u dhiska Dalka.
Wafdiga Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u baxay magaalada Boosaaso wuxuuna dhagax dhigay Waddo isku xiraysa Deegaanada Kala Bayr iyo degmada Caluula oo labaduba kamid ah meelaha ka baxsan Laamiga.
Ugu danbayn madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Puntland ayaa si weyn loogu soo dhaweyey magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland iyagoo uga mahad celiyey soo dhaweyntii shacabka Boosaaso.